'नेता–मन्त्री आए, रमिता हेरेर फर्किए ! हात लाग्यो शून्य' - Dainiki Khabar
‘नेता–मन्त्री आए, रमिता हेरेर फर्किए ! हात लाग्यो शून्य’
६ असार २०७८, आईतवार ०६:५८ admin
काठमाडौं– देशमा केही प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो वा कुनै ठूलो दुर्घटना भयो भने जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरु पुग्नु स्वाभाविक हो। सँगै मन्त्री, नेताहरु पनि दलबलसहित पुगिहाल्छन्।
यसले कतिपय अवस्थामा पीडितलाई राहतको साटो आहत पुग्छ। पछिल्लो पटक सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पनि त्यस्तै भयो। गएको मंगलबार राति मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची बजार डुबानमा परेपछि सभामुख, मन्त्री तथा नेताहरु दलबलसहित घटनास्थल पुगे।
बाढी निरीक्षणपछि नगरपालिका कार्यालयमा तस्बिर खिचाउँदै अग्नि सापकोटा
मेलम्चीमा भीषण बाढी आएपछि विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा र बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल मेलम्ची पुगेका थिए। त्यसो त सापकोटा र तामाङ सिन्धुपाल्चोककै जनप्रतिनिधि हुन् र राणा पूर्व जनप्रतिनिधि। यस अर्थमा त्यहाँ पुग्नु उनीहरुको कर्तव्य पनि होला। तर आफ्ना जनप्रतिनिधि आउँदा पनि पीडित स्थानीयले राहतको महसुस गर्न सकेनन्। उनीहरु रमिते बन्न आएको भन्दै पीडितले आक्रोश पोखे।
राज्यको जिम्मेवार तहमा रहेका सभामुख र स्वास्थ्यमन्त्री आफ्नो ठाउँमा आउँदा पनि पीडितले राहतको ठोस प्रतिबद्धता पाएनन्, ‘सक्दो सहयोग गर्छौं’ भन्नेबाहेक। ‘जनताको सुखदुःखमा साथ दिनु, आडभरोेसा दिनुको सट्टा आफ्नोे तर्फबाट हुन सक्ने गर्छु भन्ने जस्ता झुटा र कोरा आश्वासन मात्र दिएर फर्के नेताहरु,’ स्थानीय नेत्रप्रसाद खतिवडाले भने। आफूहरुको दुःखमा साथ दिन होइन, रमिते बनेर मात्र नेताहरु आएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘जनताको धनमाल जायजेथा सबै गएको छ। मन्त्री आए, गए। रमिते बन्न आएजस्तो भयो,’ खतिवडाले थपे।
सेनाको हेलिकोप्टरमा मेलम्ची पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ
अर्का स्थानीय मनोज श्रेष्ठले त झन् नेता आउँदा बन्न लागेको काम पनि रोकिने र ढिलो हुने गुनासो गरे। ‘एउटा लयमा काम भइरहेको छ। भीआईपी आए भने सबैको ध्यान त्यतै मोडिन्छ। सबै हेर्न खोज्छन्, भेट्न खोज्छन्। सुरक्षाकर्मी पनि उनीहरुकै सुरक्षामा खटिन्छन्,’ उनले भने। नेता आएर काम गराउनुको साटो गफ गरेर, अन्तर्वार्ता दिएर फर्किने गुनासो उनले गरे। ‘नेता आएर सान्त्वना दिन्छन्, सहयोगको आश्वासन दिन्छन्, जान्छन्। उनीहरुलाई जनताको पीडा बोध हुँदैन। बरु स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेका छन्,’ उनले थपे। केन्द्रीय नेता, मन्त्री आउँदा ठोस योजना लिएर आउनुपर्ने सुझाव उनको छ।
डेढ करोड लगानी गरेर माछा पालेकी सरस्वती ढकालका सबै माछा मेलम्चीले बगाइदिएको छ। होटल चलाइरहेको घर डुबेको छ। उनलाई पनि लाग्छ– काठमाडौंबाट नेता, मन्त्री आएर केही हुँदैन। ‘नेताहरु गाडीमा आए, हेरे, सरासर फर्किए। हामी छौं चिन्ता नगर्नुस् सम्म नभनी गए,’ ढकालले सुनाइन्। नेताहरु डिस्टर्ब गर्न आएजस्तो मात्र लाग्यो उनलाई।
राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा पुग्दा लागेको स्थानीयको भीड
मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार मंगलबार रातिदेखि उर्लिएको मेलम्ची खोलाले अर्बौंको क्षति गरेको छ। अग्रिम सूचना दिइएका कारण मानवीय क्षति कम भए पनि बाढीले नगरपालिकाभित्रको १० हजार रोपनी जग्गा र अर्बौंको सम्पत्ति बगाएको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालले जानकारी दिए।
मेलम्चीको बाढी हेर्दै अग्नि सापकोटा। साथमा उनका सुरक्षाकर्मी।
उनका अनुसार नगरपालिकाको मात्रै करिब ३० करोडबराबरका भौतिक संरचना बगाएको छ। ‘मेलम्चीको बाढीले सर्वसाधारणको अर्बौंको सम्पति बगाएकोे छ, जसको आँकलन नै गर्न सकिन्न,’ उनले भने। बाढीले नगरपालिकाले बनाएको बसपार्क, सामूहिक कृषि खेती, ग्रिन सिटी पार्क र फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र तहसनहस पारेको उनले सुनाए।नेपाल समय बाट
Previous निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन : पसल खोल्न टाइम कार्ड, सवारी साधनलाई अन्तिम नम्बर प्रणाली
Next “कति गैरजिम्मेवार ओली सरकार ! “- भीम रावल